Digigems စျေး - အွန်လိုင်း DGMS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Digigems (DGMS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Digigems (DGMS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Digigems ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Digigems တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Digigems များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DigigemsDGMS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000141DigigemsDGMS သို့ ယူရိုEUR€0.00012DigigemsDGMS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000108DigigemsDGMS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000129DigigemsDGMS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00128DigigemsDGMS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000891DigigemsDGMS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00315DigigemsDGMS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000528DigigemsDGMS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000189DigigemsDGMS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000197DigigemsDGMS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00315DigigemsDGMS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00109DigigemsDGMS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000763DigigemsDGMS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0106DigigemsDGMS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0237DigigemsDGMS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000194DigigemsDGMS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000214DigigemsDGMS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0044DigigemsDGMS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000983DigigemsDGMS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0149DigigemsDGMS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.168DigigemsDGMS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0535DigigemsDGMS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0104DigigemsDGMS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0039
DigigemsDGMS သို့ BitcoinBTC0.00000001 DigigemsDGMS သို့ EthereumETH0.0000004 DigigemsDGMS သို့ LitecoinLTC0.000002 DigigemsDGMS သို့ DigitalCashDASH0.000001 DigigemsDGMS သို့ MoneroXMR0.000002 DigigemsDGMS သို့ NxtNXT0.0104 DigigemsDGMS သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 DigigemsDGMS သို့ DogecoinDOGE0.0406 DigigemsDGMS သို့ ZCashZEC0.000002 DigigemsDGMS သို့ BitsharesBTS0.00559 DigigemsDGMS သို့ DigiByteDGB0.00526 DigigemsDGMS သို့ RippleXRP0.000483 DigigemsDGMS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000005 DigigemsDGMS သို့ PeerCoinPPC0.000487 DigigemsDGMS သို့ CraigsCoinCRAIG0.0642 DigigemsDGMS သို့ BitstakeXBS0.00601 DigigemsDGMS သို့ PayCoinXPY0.00246 DigigemsDGMS သို့ ProsperCoinPRC0.0177 DigigemsDGMS သို့ YbCoinYBC0.00000008 DigigemsDGMS သို့ DarkKushDANK0.0451 DigigemsDGMS သို့ GiveCoinGIVE0.305 DigigemsDGMS သို့ KoboCoinKOBO0.0328 DigigemsDGMS သို့ DarkTokenDT0.00013 DigigemsDGMS သို့ CETUS CoinCETI0.406